Monday December 19, 2016 - 10:19:34 in Wararka by Super Admin
Goob joogayaal ayaa sheegay in safiirka dowladda Ruushka u fadhiya wadanka lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada caasimadda u ah Turkiga xilli uu khudbad ka Jeedinayay Matxaf kuyaal Ankara.
Sarkaal u hadlay Booliska xukuumadda Turkiga ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in la dhaawacay safiirka Ruushka ee magaalada Ankara kadibna uu ku dhintay isbitaalka balse faah faahin dheeri ah kama bixin.
Ruuxda Toogashada geystay ayaa ku qeylinayay "Allaahu Akbar ma hilmaamayno shacabka Suuriya halkaan ku dhimo anaguna xalab ayaan ku dhimanaynaa".
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Andareey kaarloof safiirkii Ruushka ee Turkiga illaa iyo 7 xabadood lagala helay madaxa kadibna uu dhintay, wakaaladda wararka Ruushka oo soo xiganaysa mus'uuliyiin ayaa sheegtay in weerarkii lagu dilay safiirka uu ahaa ' Weerar Argagaxiso'.
Shabakadda CCN Turki waxay sheegtay in ruuxa toogashada geystay uu katirsanaa ciidanka ilaalada diblumaasiyiinta dowladda Turkiga wuxuuna xiligaasi ilaala ka haayay matfaxafka Ruushka ee magaalada Ankara.
Ciidamo kale oo booliska katirsan ayaa toogtay askariga hubeysan ee dilay safiirkii Ruushka u fadhiyay wadanka Turkiga.
Toogashada loo geystay safiirka Ruushka ee wadanka Turkiga ayaa kusoo aadaya xilli dowladda Ruushka ay xasuuq ba’an ka waddo wadanka Suuriya oo daris la ah Turkiya.